News 18 Nepal || कोभिड खोप वितरणलाई लिएर रिसाए डब्लुएचओ प्रमुख, दिए यस्तो संकेत
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठनले धनी र गरिब देशबीच कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप वितरणमा भइरहेको असमानताको आलोचना गरेको छ । डब्लुएचओका प्रमुख डा. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोस खोप वितरणमा गम्भीर असमानता रहेको अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आजसम्म विश्वका सबै देशमा खोप अभियान सुरु गर्ने लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै अप्रिल र मे महिनामा उक्त लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । डब्लुएचओले कोरोनाको खोपको समान वितरणमा जोड दिँदै आएको छ ।
कोभ्याक्स अभियानको नेतृत्व गरेको डब्लुएचओले सो अभियान अन्तर्गत हालसम्म एक सय देशमा तीन करोड ८० लाख मात्रा खोप वितरण गरिसकेको छ । कोभ्याक्स अन्तर्गत मार्च अन्तिमसम्ममा १० करोड खोप वितरण गर्ने तय भए पनि तीन करोड ८० लाख मात्रा वितरण भएको छ ।
जब बिरामी बोकेर उडेको हवाईजहाजको पांग्रा खस्यो
भारतमा संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड, एकैदिन थपिए यति धेरै संक्रमित
भारतमा फेरि बढे संक्रमित, कतिले गुमाए ज्यान ?
कोरोना कहरका बीच चीनलाई अमेरिकाको कडा चेतावनी
चीनमा फेरि देखियो कोरोना, एकै दिन थपिए यति धेरै संक्रमित
किन अलग भए बिल गेट्स र मेलिन्डा ?